Mgbanaka Sanwichi Chicken & Cod - Goodao Technology Co., Ltd.
nkịta snacks/ nkịta emeso
Mgbanaka Sanwichi Chicken & Cod
Mgbanaka Sanwichi Chicken & Cod bụ sanwichi nke ọkụkọ na cod họọrọ. Ngwaahịa a nwere njiri mara abụba dị ala, kọlestrọl dị ala na protein dị elu, nke nwere ike ịkwalite ike anụ ahụ nke nkịta n'ụzọ dị irè, yana ịgbakwunye nri anụ ahụ.
Nri protein: 18%min,
Abụba gbara abụba: 5.5% max,
Ntụ ntụ: 3.5% max,
Eriri ụrọ: 1.5% max, Mmiri: 18% max
Aha ngwaahịa Mgbanaka Sanwichi Chicken & Cod
Adabara Ụdị nkịta niile dị obere na ọkara nwere ihe karịrị ọnwa atọ
Ngwaahịa bụ isi ihe Ọkụkọ, Cod
Nkịta na -erubeghị ọnwa atọ ekwesịghị iji ngwaahịa a n'ihi mmepe nke eriri afọ na -ezughị oke
Mgbe ị mepere akpa ahụ, hapụ ya na ebe dị jụụ na nkụ
Biko nye mmiri zuru oke mgbe ị na -enye nri
Ọ na -agbaso ụkpụrụ '' Onye na -akwụwa aka ọtọ, onye na -arụsi ọrụ ike, onye na -arụ ọrụ, ihe ọhụrụ '' ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ mgbe niile. Ọ na -ele ndị ahịa anya, ihe ịga nke ọma dịka ihe ịga nke ọma ya. Ka anyị zụlite ọdịnihu na -aga n'ihu nke ọma maka N'ogbe OEM/ODM China Frozen Halal Chicken Breast Fillets Skinelss, Anyị na -ewere ọrụ zuru oke iji gboo mkpa ndị ahịa anyị niile; nweta nkwalite na -aga n'ihu site n'ịkwado mgbasawanye nke ndị na -azụ anyị; ghọọ onye na -emekọ ihe ọnụ na -adịgide adịgide nke ndị ahịa wee bulie ọdịmma ndị ahịa maka Mbelata ego mkpokọta China Carbide End Millshss Bandsaw Blade Wood Cutting Saws, azụmahịa mbụ, anyị na -amụta ibe anyị. Ọzọkwa azụmahịa, ntụkwasị obi na -eru ebe ahụ. Companylọ ọrụ anyị na -anọ mgbe niile na ọrụ gị n'oge ọ bụla.
Ego mbelata China Steel Strips 51CRV4 Sk75 M42 M51, Saws Band Saw maka Osisi, Gịnị kpatara anyị ga -eji mee ihe ndị a? N'ihi na: A, Anyị na -akwụwa aka ọtọ na ntụkwasị obi. Ngwaahịa anyị nwere oke mma, ọnụahịa na -adọrọ adọrọ, ikike ọkọnọ zuru oke na ọrụ zuru oke. B, Ọnọdụ ala anyị nwere nnukwu uru. C, ụdị dị iche iche: Nabata ajụjụ gị, a ga -enwe ekele dị ukwuu.
Nke gara aga: Ibe ọkụkọ
Osote: Ọkụkọ na -ekpuchi Donut
Ọkụkọ na -ekpuchi Donut
Chicken jerky & Cowhide mkpisi
Kechie anụ ọkụkọ ọkụkọ
Mpekere ọkụkọ na ọbọgwụ
Sanwichi mkpọ ọkụkọ
Akọrọ Duck Jerky